Apple TV 4K latsaky ny 160 euro | Avy amin'ny mac aho
Indraindray isika dia mahita ny tolotra amin'ity karazana ity izay azontsika lazaina fa tsy azo tohaina. Ny varotra fahavaratra dia natomboka ary amin'ny toerana sasany dia afaka mahita varotra tena izy isika amin'ny resaka vokatra avy amin'ny Apple sy marika hafa. Amin'izao fotoana izao, ilay nahagaga antsika dia ilay tolotra hita ao amin'ny tranonkala eBay malaza, izay ahafahantsika mividy Apple TV 4K latsaky ny 160 euro.
Momba ny Apple TV 4K dia tsy manana zavatra betsaka holazaina izahay fa tsy mbola fantatrao, saingy afaka milaza izahay fa misy ny tolotra Apple TV 32GB vaovao, tsy ampiasaina, tsy nosokafana, tsy simba ary amin'ny fonosana voalohany, toy ny aseho amin'ny famaritana ny vokatra.
Tadidio fa mividy an'ity karazana vokatra ity ivelan'ny fivarotana Apple tsy olana amin'ny fiantohanaAnkoatr'izay, ny mpivarotra amin'ny eBay dia manana safidy miverina raha toa ka tsy resy lahatra amin'ny vokatra izahay.
Etsy ankilany dia miresaka momba ny fahasamihafana 44 euro isika raha mijery ny vidin'ny ofisialin'ity Apple TV ity amin'ny tranokala Apple, dia toa tsy dia misy fahasamihafana firy izany fa raha ny tena izy dia afaka mividy fampiharana vitsivitsy na mandoa famandrihana amin'ny Netflix, HBO na mitovy mandritra ny fotoana fohy. Na izany na tsy izany, ny tolotra dia mbola mahaliana ihany ho an'ireo mpampiasa izay tsy nahita ny tolotra na fihenam-bidy teo aloha tamin'ny vidin'ity boaty ambony napetraka avy any Apple ity ary te-hividy azy. Miala mivantana ny rohy mankany amin'ny pejy mpivarotra eBay hahafahanao manao ny fividianana mivantana avy eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple TV 4K izay latsaky ny 160 euro